5 Best Holidays National In Europe in ay la kulmaan | Save A tareenka
Home > safarka Europe > 5 Best Holidays National In Europe in ay la kulmaan
dal oo Yurub ah ka jeclaataa dabaal fasaxa ay qaranka - gaar ahaan kuwa arkaan wax badan oo dalxiisayaasha. Ayaa qorsheyneysa aad si ay u arkaan mid ka mid ah dalalkaas lagu jiro fasaxyada qaranka? Haddii ay sidaas tahay, waxaa jira siyaabo badan oo ay biiro xaflado ah!
Waxa kale oo aad heli doontaa fursad aad u fiican in wax badan oo ku saabsan in dalka ay bartaan taariikhda. Fahmida kibirka maxaliga ah ee aad u horseedi kara inay mahad dalka iyo dadka ay ka sii. Aynu eegno at the 5 ugu wanaagsan ee fasaxyada qaranka ee Europe:
Dhalashada rasmiga ah ee Queen, Boqortooyada Ingiriiska
King George II jiray oo taliye ahaa, kuwaas oo la aasaasay xeerkii dabaal dhalashada Boqortooyada ee 1748. Tan iyo markaas, Boqortooyada Ingiriiska ayaa u dabaal dhalashada ee ay Boqortooyada. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku beddeleen taariikhda dhawr jeer. Hadda waxay u dabaal Dhalashada rasmiga ah ee Queen on Saturday labaad ee June. Haddii aad ku sugan tahay England inta lagu guda jiro waqti in, laga yaabaa in aad arki Queen ayaa Dhalashada Parade. Xafladda ayaa waxaa sidoo kale loo yaqaan kaga beeggan Color ah.
* Sawirka in image feature Blog waxaa dabaaldegyada Maalinta Dhalashada rasmiga ah ee Queen
Maalinta Republic, Italy
Talyaaniga dabaal maalinta ay Republic on June 2nd, taas oo ah dhaqan ay bilaabeen in 1946. Codbixinta ay guushu ku baabiiyo Boqortooyada, Talyaanigu wuxuu gogol xaar u ahaa Jamhuuriyadooda. Si kastaba ha ahaatee, waxay u guurtay taariikhda xaflad si Saturday ugu horeysay ee June in 1977. Waxay la walwalsan in taariikhda asalka xun ka muuqataa on dhaqaalaha. Waxay kaliya dib taariikhda hore ee 2001. Waxaa jira badan oo xaflado in ay ka markhaati Italy oo dhan Maalinta Republic. Aragtida ugu xiisaha badan waa biriijka ay marayaan Ciidanka Cirka ee Talyaaniga.
maalinta Qaranka, Sweden
Dalka Iswiidan waxay u dabaal Maalinta Qaranka ay 6-dii June. Waa munaasabadda farxadda dalka oo dhan. Waxay sugeen dabaal Maalinta Calanka ee 1916, iyo hadda waxa maalin oo xiiso leh iyo nasashada. Waxaa jira riwaayadaha muusikada, ciidaha, iyo hawlaha kala duwan waxaad ka xaadiri kartaa. Sidoo kale waa maalintii dalka Iswiidan ku cusub si rasmi ah u helaan dhalashada. Iswiidhan waxay hubisaa in qof kastaa dareemo soo dhaweyn maalinta Calanka!
Maalinta Bastille, France
Marka ay timaado in Faransiis ah, maalin kibirka qaran waa on July 14. Waxaa guuradii ka mid ah foosha xun ee Bastille ah. Taasi waxay ahayd dhacdo muhiim ah Revolution Faransiis ee 1789. Waxaa jirtay dhoolatus military si ay u dabaal dhawaad ​​sannad walba tan iyo markii 1880. Waa hortiisa la yaab leh si ay bal eeg! Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira nasasho dabaal kale sida wanaagsan wax u arko. Maalinta Bastille waa waqti ku haboon in ay ku sugan France, oo ka fiican in Paris.
maalinta Qaranka, Switzerland
Maalinta Qaranka Swiss waa 1-dii August. Waxay u dabaaldegtaa maalinta ay tahay saddexda gobal ee aasaaska Switzerland midaysan 1291. Swiss ayaa ka dhici Maalinta Qaranka ay si dhab ah. Mid ka mid ah dhacdooyinka waawayn Hadal ka madax sare ama saraakiisha sar sare ee kale. Waxa kale oo jira dhoolatus ee Zurich. Waxaad ka xaadiri kartaa xaflado in magaalooyinka iyo tuulooyinka kale. Tusaale ahaan, jacaylka Swiss ay baadiyaha weeynaa fasaxa. jiga Ski waa meel kale fasalka-koowaad inuu noqdo inta lagu guda jiro Maalinta Qaranka.
fasaxyada Qaranka ee Europe waa munaasabad aad u weyn in badan oo ku saabsan taariikhda ummadda aad booqanaya bartaan. Waxa kale oo mar walba maalin hawlo xiiso leh iyo maraan buuxiyey.
Qorshaynta Fasax ah ee Europe oo ku saabsan mid ka mid ah Holidays National? Ballansan Your Tigidhada in Tareenku oo wuxuu ku raaxaysan!
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog 5 Holidays National fiican Yurub gal goobta? sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-national-holidays-europe%2F%3Flang%3Dso- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
#HolidayinEurope #fasaxyada #nationalholiday #nationalholidays europetravel